कुन ब्लड ग्रुपका मानिसमा हार्ट अट्याकको धेरै खतरा छ ? तपाईंको कुन - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कुन ब्लड ग्रुपका मानिसमा हार्ट अट्याकको धेरै खतरा छ ? तपाईंको कुन
प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०७५, शुक्रबार December 7, 2018
काठमाडौं । बदलिँदो जीवनशैली तथा खानपानका कारण मानिसमा मुटु सम्बन्धी रोगको खतरा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय विश्वमा मुटुसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु बढीरहेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । मुटुसम्बन्धी रोग लाग्नुको प्रमुख कारण अस्वस्थ्य खानपान, व्यायामको कमी, तनाव लगायतलाई मानिएको छ । तर एक अनुसन्धानका अनुसार हार्ट अट्याकको एक कारण हाम्रो शरीरमा रहेको रगतको समूह –ब्लड ग्रुप) पनि हुन्छ । ब्लड ग्रुपबाट हार्टअट्याकको खतरा पत्ता लाग्न सक्छ । साथै यो सम्भावनाको पनि पत्ता लाग्छ कि कुन ब्लड ग्रुपका मानिसमा हार्ट अट्याकको धेरै खतरा छ ?
अनुसन्धान सबै ब्लड ग्रुपलाई ध्यानमा राखेर गरिएको थियो र केही हार्टअट्याकका बिरामीलाई पनि अनुसन्धानमा सहभागी गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सबै भन्दा धेरै अट्याक ति मानिसमा पाइयो जसको ब्लड ग्रुप ए,बी या फेरि एबी थियो ।
जुन ब्लड ग्रुपलाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ , यो ब्लड ग्रुपको मानिसमा मुटुसँग जोडिएका बिरामी हुने खतरा सबैभन्दा बढी हुने अध्ययनले देखाएको हो ।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन जर्नल आर्टरियोसक्लोरोसिस मा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार ओ ब्लड ग्रुप भएका मानिसको तुलनामा ए, बी तथा एबी ब्लड ग्रुप भएका मानिसमा हार्ट अट्याकको आशंका ९ प्रतिशत धेरै हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
ए ब्लड ग्रुपलाई धेरै कोलस्ट्रोलको लागि जानिन्छ । जो हार्टअट्याकको प्रमुख कारण हो ।
तपाईले आफै भित्र खोज्नु भएको छ इश्वरीय सत्ता ? कहाँ छ ईश्वरको साम्राज्य ?
काठमाडौं । एकपटक ईसामसीह एक अग्लो पहाडमा बसेका थिए । त्यहाँ धेरै वृक्ष लगाइएको थियो। त्यस पहाडबाट मैदानमा […]
ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्तो काम
पेटमा प्रकृतिले नै एसिड (अम्ल) उत्पादन गराउँछ। हामीले खानासँग खाएको ब्याक्टेरिया मार्नेदेखि लिएर खानेकुरा […]
एउटै गुणका कारण मानिस पशुभन्दा फरक
भोजन, निन्द्रा, भय, मैथुन यी मानिस र पशुमा समान छन्। मानिसमा केवल एउटै गुण बढी छ, त्यो हो ज्ञान। ज्ञानरहित […]
धर्तीलाई प्रणाम गर्न किन भन्छ सनातन हिन्दू धर्म ?
विहान उठ्नासाथ धर्ती(पृथ्वी)मा टेक्नुभन्दा पहिला धर्ती(पृथ्वी) लाई प्रणाम गर्न सल्लाह दिन्छ । किनकी धर्ती […]